? => HCl (chloride hydrogène) | Mpifandanja ara-tsimika Equation
? = HCl | Mpifandanjana ny fampitoviana simika
? = hidrozida klôro
Valiny 313 hita
Maneho fampitahana avy amin'ny 1 ny 5 Pejy 1 - Azafady mikorisa hatramin'ny farany hahitanao vokatra hafa
Cl2 + C3H8 → levitra + C3H7Cl
chlore propane hidrôzôro klôro 2-Chloropropane; Isopropyl chloride; Isoprida; Narcosop
(Vàng lục) (hoy màu)
Fanazavana fanampiny momba ny equation Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl
Inona ny fihetsiky ny Cl2 (chlorine) amin'ny C3H8 (propane) ?
Temperature: 25 ° C Toe-javatra hafa: fahazavana
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra HCl (chloride hydrogène) sy C3H7Cl (2-Chloropropane; Isopropyl chloride; Isoprid; Narcosop) ?
Cl2 dia mihetsika amin'ny C3H8
Ny trangan-javatra taorian'ny Cl2 (chlorine) dia mihetsika amin'ny C3H8 (propane)
Amin'ity tranga ity dia mila mandinika fotsiny ianao mba hahitana raha fananan'ny vokatra C3H7Cl (2-Chloropropane; Isopropyl chloride; Isoprid; Narcosop), mipoitra amin'ny faran'ny valiny.
Na raha misy amin'ireto zavatra manaraka ireto: C3H8 (propane), manjavona
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl
Ireo singa mifandraika amin'ny Cl2 (chlorine)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny Cl2 (chlorine)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy Cl2 (chlorine) ho reactant?
Ireo singa mifandraika amin'ny C3H8 (propana)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny C3H8 (propane)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika manana C3H8 (propane) ho reactant?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra HCl (chloride hydrogène)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HCl (propane)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HCl (chloride hydrogène) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra C3H7Cl (2-Chloropropane; Isopropyl chloride; Isoprid; Narcosop)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny C3H7Cl (propane)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy C3H7Cl (2-Chloropropane; Isopropyl chloride; Isoprid; Narcosop) ho vokatra?
CO + H2O + PdCl2 → 2levitra + CO2 + Pd
gazy karbonika rano palladium (ii) chloride hidrôzôro klôro gazy karbonika Pd; Padiumadium
(hoy màu) (hoy màu) (màu đỏ sẫm) (hoy màu) (hoy màu) (ạh bạc trắng)
Fampahalalana momba ny orinasa equation CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd
Inona no fihetsiky ny CO (carbon monoxide) miaraka amin'ny H2O (rano) mihetsika amin'ny PdCl2 (palladium(ii) chloride) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra HCl (chloride hydrogène) sy CO2 (gazy karbonika) ary Pd (Pd; Palladium) ?
Tontolo iainana taorian'ny CO (carbon monoxide) mihetsika amin'ny H2O (rano) mihetsika amin'ny PdCl2 (palladium (ii) klôro)
Amin'ity tranga ity dia mila mandinika fotsiny ianao mba hahitana raha fananan'ny vokatra Pd (Pd; Palladium), mipoitra eo amin'ny faran'ny fanehoan-kevitra.
Na raha misy amin'ireto zavatra manaraka ireto: PdCl2 (palladium (ii) klôro), manjavona
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd
Fanontaniana mifandraika amin'ny PdCl2 (palladium(ii) chloride)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny PdCl2 (palladium(ii) chloride)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika manana PdCl2 (palladium(ii) klôro) ho reactant?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HCl (palladium(ii) chloride)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HCl (chloride hydrogène) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra CO2 (gazy karbonika)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny CO2 (palladium(ii) chloride)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy CO2 (gazy karbonika) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra Pd (Pd; Palladium)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny Pd (palladium(ii) chloride)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy vokatra Pd (Pd; Palladium)?
C2H5Cl → C2H4 + levitra
etilena hidrôzôro klôro
Fanazavana fanampiny momba ny equation C2H5Cl → C2H4 + levitra
Inona ny toetry ny fihetsiky ny C2H5Cl () ?
Catalyst: vahaolana NaOH / C2H5OH
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra C2H4 (éthylene) sy HCl (chloride hydrogène)?
Famotehana ny C2H5Cl
Ny tranga taorian'ny C2H5Cl ()
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika C2H5Cl → C2H4 + levitra
Ireo singa mifandraika amin'ny C2H5CXNUMX
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny C2H5Cl ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika manana C2H5Cl () ho reactant?
Ireo singa mifandraika amin'ny C2H4
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny C2H4 ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy vokatra C2H4 (ethylene)?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HCl ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HCl (chloride hydrogène) ho vokatra?
Vokatra fitoviana # 4
Cl2 + H2O ↔ levitra + HClO
chlore rano hidrôzôro klôro asidra hypochlorous
(Vàng lục) (hoy màu) (hoy màu) (hoy màu)
Fanazavana fanampiny momba ny equation Cl2 + H2O → HCl + HClO
Inona no fihetsiky ny Cl2 (chlorine) amin'ny H2O (rano) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra HCl (chloride hydrogène) sy HClO (asidra hypochlorous)?
Ento ao anaty rano iray vera ny gazy klôro, atobohy ao anaty ny vahaolana azo ny litmus taratasy
Tontolo iainana taorian'ny Cl2 (chlorine) mihetsika amin'ny H2O (rano)
Ny fiasan'ny klôro amin'ny rano dia misy lalana mifanohitra roa. Ny rano klôro dia fitambaran'ny akora toy ny Cl2, HCl, HClO ka mavo sy maitso. Tamin'ny voalohany, ny asidra dia mahatonga ny taratasy litmus ho mena, fa avy eo dia simbaina noho ny fihoaram-pefy mahery HClO.
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika Cl2 + H2O → HCl + HClO
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HCl (rano)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HCl (chloride hydrogène) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra HClO (asidra hypochlorous)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HClO (rano)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HClO (asidra hypochlorous) ho vokatra?
Vokatra fitoviana # 5
Cl2 + H2S → 2levitra + S
chlore hidrôdiôma sulfida hidrôzôro klôro solifara
(khí) (khí) (dung dch) (kt)
(hoy màu) (không màu, mùi sốc) (hoy màu) (đen)
Fanazavana fanampiny momba ny equation Cl2 + H2S → 2HCl + S
Inona no fihetsiky ny Cl2 (chlorine) amin'ny H2S (hydrogène sulfide) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra HCl (chloride hydrogène) sy S (sulfur)?
Famindrana klôro amin'ny alàlan'ny vahaolana H2S
Ny trangan-javatra taorian'ny Cl2 (chlorine) dia mihetsika amin'ny H2S (hydrogène sulfide)
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika Cl2 + H2S → 2HCl + S
Fanontaniana mifandraika amin'ny H2S (hydrogène sulfide)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny H2S (hydrogène sulfide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy H2S (hydrogène sulfide) ho reactant?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny HCl (hydrogène sulfide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy HCl (chloride hydrogène) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra S (sulfur)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny S (hydrogène sulfide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy S (sulfur) ho vokatra?
Maneho fampitahana avy amin'ny 1 ny 5 Page 1